Gini mere eji eme ka ndi ahia B2B na-ebughari bu nani uzo ozo maka ndi na emeputa ihe na ndi na enye ahia Post COVID-19 | Martech Zone
Ọrịa na-efe efe nke COVID-19 ewepụtala igwe ojii nke enweghị mgbagwoju anya na mpaghara azụmaahịa ma bute mmechi nke ọtụtụ ọrụ akụ na ụba. N'ihi nke a, o yikarịrị ka ụlọ ọrụ achụmnta ego ọ ga-ahụ mgbanwe mgbanwe n'agbụ, usoro ọrụ, omume ndị ahịa, yana ịzụ ahịa na ịzụ ahịa.
Ọ dị mkpa ịme ihe iji mee ka azụmahịa gị nọrọ n'ọnọdụ echedo ma mee ka usoro mgbake ahụ dị ngwa. Nkwado azụmaahịa nwere ike ịga ogologo oge n'ịgbanwe maka ọnọdụ na-atụghị anya ya ma hụ na nkwado. Karịsịa maka ndị na-egwu egwu na B2B commerce supply chain, oge a na-ejighị n'aka dị ka ndị a nwere ike iweta a pusi na mgbidi ọnọdụ. Nwere ike ịda ihu na ahịa ma ọ bụ na ọ na-esiri gị ike ịchọta ịrị elu na ọchịchọ. Ọ bụ ezie na ọnọdụ abụọ ahụ nwere ike ịdị na-enye nsogbu, ndị nrụpụta na ndị na-ekesa nwere ike ịdabere na ịga n'ihu azụmaahịa na nkwụsi ike iji gbochie ihe ịma aka ahụ ma hụ na nnyefe a na-egbochi egbochi na oria ojoo a.
Ọnọdụ dị ugbu a amanye ndị azụmahịa ịme mgbanwe mgbanwe na atụmatụ ha ịga ahịa. Ndị a bụ ụfọdụ ebe mgbadoro anya nwere ike inyere gị aka hụ na ị ga n'ihu ma wuo ihu na-akwụsi ike n'oge nsogbu ahụike kacha njọ nke narị afọ.
Iweghachị ọdachi - Ndị ọchụnta ego ga-amata mmetụta ọrịa ahụ na-efe na arụmọrụ arụmọrụ. Dịka nzaghachi ozugbo, ọtụtụ ụlọ ọrụ eguzobewo akwara azụmahịa na-arụ ọrụ iji belata mmetụta nke ọrịa ahụ na arụmọrụ ahịa. Ha emeela mgbanwe dịka okwu kredit na-agbanwe iji kwado ndị ọrụ ha. Ọ bụ ezie na atụmatụ ndị a nwere ike inyere aka iru ihe mgbaru ọsọ ozugbo, ịhazi nlezianya na igbu ya dị oke mkpa maka mgbake ogologo oge.
Usoro mbu nke dijitalụ - A ga - agbanwe mgbanwe B2B na post-COVID-19 oge na - agbanwe agbanwe site na offline na ndị na - ajụ dijitalụ. Ọrịa ahụ enyeela ohere maka usoro ahịa ahịa digitalization na-aga n'ihu. Dika ulo oru B2B buru uzo buru ibu na mmekorita dijitalia na nso nso, ị ghaghi ile anya ahia obula iji choputa ohere di iche iche nke dijital. Iji melite ahụmịhe dijitalụ, hụ na ndị na-azụ ahịa nwere ike ịchọta ozi dị njikere na weebụsaịtị, ma tulee ngwaahịa na ọrụ. Ikwesiri idozi nsogbu oru obula na oge ma choo ohuru na uzo ohuru iji mee ka ndi ahia mara.
Ndị na-eweta ngwaahịa Etugharị Egwuregwu Ha - Ndị na - enye ọrụ na - enye ahụmịhe dijitalụ a pụrụ ịdabere na ya na-elekwasị anya na ọsọ, nghọta, na nka nwere ike gbakee ngwa ngwa ma too ndị ahịa ha. N'ime mgbalị a, ị ga-etinyerịrị teknụzụ ma webata atụmatụ ndị ahịa nwere mmekọrịta dị ka mkparịta ụka ndụ nwere ike inyere aka ịghọta ihe chọrọ chọrọ ma zaghachi ngwa ngwa. Na mgbakwunye na mmekọrịta na weebụsaịtị, ndị na-eweta ngwaahịa na-atụ anya ịbawanye ụba na ngwa ngwa ekwentị yana ndị na-elekọta mmadụ mgbasa ozi. Yabụ, na nke ọhụrụ, ịkwesịrị ịme mgbanwe mgbanwe na usoro ahịa gị iji nwee ike ịme ọtụtụ ohere na mpaghara ngosi.
eCommerce na Digital mmekọrịta - Nsogbu ugbu a na-eweta ohere iji gbasaa eCommerce na ike dijitalụ gị. A na-atụ anya na eCommerce ga-arụ ọrụ dị oke mkpa na ọkwa mgbake yana akụkụ uto na-esote. Ọ bụrụ na azụmahịa gị enweghị ikike dijitalụ, ị nwere ike ịhapụ ohere na-enweghị njedebe na ntanetị ntanetị. Ulo oru B2B ndi tinyeworo aka na iwulite eCommerce na mmekorita dijitalụ nwere ike ile anya inweta ego di elu site na ndi ozo.
Ime ere - Iji belata mmetụta dị na ire ahịa, ọtụtụ azụmaahịa B2B agbaala aka mgbanwe na ụdị azụmaahịa mebere n'oge ọrịa na-efe efe. Ihe e mesiri ike na ire ere na ijikọ site na mkparịta ụka vidiyo, webinars, na chatbots amụbaala nke ukwuu. Ọ bụ ezie na ụfọdụ azụmaahịa na-adabere kpamkpam na ndị na-ajụ ase iji dochie ahịa ahịa, ndị ọzọ na-eji ndị ahịa azụmaahịa ha na ahịa weebụ. Imirikiti achọtara ọwa dịpụrụ adịpụ ka ọ dịkwa oke ma ọ bụ karịa maka iru na ijere ndị ahịa ozi. Ya mere, ojiji nke ọwa ndị dịpụrụ adịpụ nwere ike ịbawanye ọ bụ ezie na enwerela ike igbochi njem na ndị mmadụ na-alaghachi ọrụ ha.
Ntughari uzo ozo - Nnukwu ndọkụrịta na ngwongwo ọkọnọ n'oge Covid-19 gosipụtara mkpa ọ dị maka azụmaahịa iji mejuputa mgbanwe na atụmatụ ịzụ ahịa. Nbibi na ngwongwo a na-eweta na-egbochi inweta ihe akụrụngwa n'aka ndị na-ere ahịa, ọkachasị mgbe a na-enweta ngwa ọrụ na mba ụwa. Iji merie ihe ịma aka a, ndị ọchụnta ego kwesịrị ile anya na ndị na-ere ahịa na mpaghara ka ha nweta ngwaahịa. Secchekwa nkwekọrịta na ndị na-ere ahịa mpaghara nwere ike inyere aka gbochie igbu oge na mmepụta na nkesa. O nwekwara ike ịba uru n'oge a iji chọpụta ngwaahịa na ihe ndị ọzọ.
Atụmatụ na-aga n'ihu na itinye ego ogologo oge - Maka ire B2B, nke a bụ oge dabara adaba iji zụlite ndu ma tinye ego dị ogologo oge. Soro ma jigide nkwukọrịta oge niile na atụmanya dị na pipeline ma chọpụta ohere dị ogologo oge. Gwa ha gbasara atụmatụ gị na usoro ị ga-eme iji hụ na ịga n'ihu. Ga-eji nwayọ gbanwee ịgbado anya gị site na mmeghachi omume mberede na ụdị ogologo oge nke nrụgide ọrụ. N'ime usoro a, tinye aka n'ime atụmatụ na-aga n'ihu iji mụta ihe site na nsogbu dị ugbu a. Ga-amatakwa ihe egwu dị na arụmọrụ na ọrụ azụmaahịa dị oke mkpa ma na-eme usoro omume ị ga-eme. Zụlite ikike idi ike nwere ike inyere aka ịnagide mmemme ndị a na-enwetụbeghị ụdị ya wee laghachi n'ọnọdụ mbụ nke azụmaahịa na-enweghị mmetụta na arụmọrụ.
Kọwaa Ọrụ Ọhụrụ Ndị Ahịa Ahịa - Mgbanwe gaa na ntanetị anaghị emetụta ọrụ nke ndị na-ere ahịa ndị achọrọ ugbu a ka ha mara nke ọma na ngwaọrụ dijitalụ dị ka Zoom, Skype, na Webex. Ndị ọkachamara n'ahịa na-arụ ọrụ na gburugburu B2B ga-aghọtarịrị ngwaọrụ dị iche iche dị n'ịntanetị iji mesoo ma zaghachi ajụjụ ndị ahịa nke ọma. Ka ị na-akwado maka mmụba nke ahịa dijitalụ, ghọta otú kacha mma ị ga-esi zụọ ma kesaa ndị ọkachamara n'ahịa gafere ọtụtụ ọwa iji nye ọrụ na nkwado ndị ahịa. Ọzụzụ na itinye ego na ndị ọrụ gị ga - enweta ụgwọ ọrụ ogologo oge.
Echerela ka oria ojoo a na-akwusi
Ndị ọkachamara na-atụ aro na coronavirus nwere ike ịnọnyere anyị ruo ogologo oge wee gaa n'ihu na-agbasa ruo mgbe e mepụtara ọgwụ mgbochi iji kpochapụ ya. Dika ndi otu di iche iche na-acho iwughari ma malite oru ha site na ndi oru mmanye na nlezianya di nkpa, odi nkpa itinye oru nile na ihe ohuru a choro.
Ndị ọchụnta ego ga-enwerịrị usoro na-aga n'ihu ma soro usoro atumatu iji hụ na arụmọrụ na-aga n'ihu ma gbochie nsogbu ndenye. Debe ngwa ahịa dị njikere ma kwadebe tupu oge eruo ka ị ghara ihie ohere ịre ahịa. Dịka mgbake akụ na ụba na oge post-COVID-19 nwere ike ịdị ngwa ngwa karịa ka a tụrụ anya ya, ị ga-eji oge a iji kwadebe maka ọchịchọ a na-achọ. Cheta, ọ bụrụ na ibidoghi ugbu a, ị gaghị enwe ike iji nnukwu ohere nweta ohere n'oge ahụ dị mma.
Tags: ọzọ sourcingazụmahịa b2bazụmahịa b2bb2b ahịaịga n'ihu na-eme atụmatụCOVID-19mmekọrịta dijitalụdijitalụ-ụzọ nke mbụmgbake ọdachimmekọrịta ecommercemgbake akụ na ụbaNdepụta Ngwaahịangwa ngwaitinye ego ogologo ogeemepụtaọrịamgbakedịpụrụ adịpụ irendị na-eweta ọrụ